Ngaba ii-Blogger zemidlalo yeTekhnoloji eyi-2,000 XNUMX? Waaaaah! | Martech Zone
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 7, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ibhlog yam ibhalisiwe okwethutyana emva Uluhlu lwe-Z. Kwakuluhlu oluhle kakhulu lweeblogger ezaziwayo ezazisebenza nzima kakhulu kubugcisa bazo kwaye zazinenqanaba lokukhula lempembelelo kwi-blogosphere nakwiwebhu. Uluhlu lupapashwe ngokutsha kumakhulu ebhlog, luchaphazela inqanaba lethu kwiTechnorati nakwindawo ebekwe kwiinjini yokukhangela. Kwincopho yayo, kubhloga uluhlu lwe-A Seth Godin ndachitha ixesha ndithetha ngayo.
Uvavanyo olutsha luqale ngekholaji yee-blogger ezingama-2000… ubuso beeblogi ezivela kwihlabathi liphela. Ndiyenzile leya, nayo! Omabini la maxesha bendikuluhlu kwaye khange ndiyicele. Kuvavanyo lwebhlog ka-2000, ndaye ndavolontiya, kodwa eneneni yayisemva kokuba sele ndibekwe kuyo ndingenalo ulwazi. Ndayeka ukuthumela i-2,000 kwindawo yam ... nangona kunjalo umthamo omkhulu wemifanekiso ukubonisa!
Ngoku ezinye iibhlog ziyakhala ngokungcolileyo ngale nto. Iindawo ziyangxola nokuba boycott Technorati.
I-55,000,000 blogs emhlabeni kwaye ngandlela thile ezi 2000 blogs 'zishukumisa indalo yonke'. Ndinike isithuna. Oku kwahluke kwaphela ekwabelaneni ngebhlogi yakho, unxibelelwano lomntu, unikezela ngentengiso ngokukhankanya ibhlog yakho, ikhonkco, "Ndenzele i-Technorati Favorite" iqhosha, 'ulungiselela' iinjini zokukhangela, Ukumba,…. okanye UKUTHENGA isikhundla sakho seTechnorati ngokwenza intengiso kwezinye iisayithi. UJohn ChowUmzekelo, uyaqhubeka nokusebenzisa naziphi na iindlela ukuze anike isikhundla sakhe amandla.
Ndiyakhathala? Ngokuqinisekileyo akunjalo!
Oku kuyinyani bantu… ayikho enye into. Kuhlawula ukubhengeza, ixesha. Oko kwathethi, intengiso inokufumana isikhundla, ifuthe, igunya, kunye nokubekwa kweinjini yokukhangela… kodwa ayizukugcina. Ukugcina inqanaba lakho, impembelelo, igunya, kunye nokubekwa kweinjini yokukhangela, kuya kufuneka usebenze kumxholo wakho. Ngaphandle koko indawo yakho iya kuba ngumnyango ojikelezayo weendwendwe kwaye indawo yakho iya kuhla kwiityhubhu.
Ekuhambeni kwexesha, amanani anyusiweyo aya kuncipha. Ngexesha, iibhloko ezifanelekileyo ziya kunyuka ziye phezulu. Kuza kubakho abantu ababhabhayo abadlula kuwe abangakufanelanga kwaye nabantu oya kuba ubhabha udlula ngenene. UJohn Chow unyuka kwinqanaba leleli kwaye emva koko ubonelele abafundi bakhe ngomxholo osemgangathweni ukuze ahlale apho.
Ndikhumbula ithutyana ndibuye nini Scoble Ndikhankanyile indlela iiNgcaciso zeNgcaciso yezeNtlalo ezonakalisa ngayo ibhlogi yakhe. Ngaba wayehleli ejikeleze kwaye wacela ukuba boych iDigg? Hayi! Usungule inyathelo elitsha eliqhuba ngamandla kwaye aziveze kubaphulaphuli abatsha.
Le ayisiyiyo Kindergarten, yeka ukukhala kwaye ubuyele kumdlalo. Ndoda phezulu!
Nalu uluhlu lwezithuba zebhlog malunga noluhlu… ndibabeka kuluhlu oluhle ukuze uzibeke kwindawo yakho ukuba uthatha isigqibo sokuphawula kuluhlu lweebhlog ze2,000. Mhlawumbi singayiqala 2,000 ethetha ngama-2,000 XNUMX uLuhlu.
Ngelishwa, ezi blogger zithetha ngamawaka amabini e-blogger olingo ngoku baphakamisa isikhundla sabo kwiTechnorati. Mhlawumbi ukuba siyohlwaya wonke umntu okuluhlu, kuya kufuneka sohlwaye wonke umntu obhlohla malunga noluhlu, eh ?!
Ungubani wena ukuba undixelele ukuba andifanele inqanaba endinalo? Ndiyakholelwa ngokwenyani ukuba umxholo kunye nolwazi endizisela abafundi bam ngowona mgangatho uphezulu kwaye kufanelekile kakhulu kuninzi lweebhlog eziphezulu ze-100 Technorati phaya. Ayisiyo iTekhorati ukuthatha isigqibo. Ayikokwakho ukuba uthathe isigqibo. Yenzelwe abantu abaqhubeka nokubuyela kwaye bafunde ibhlog yam ukuze bathathe isigqibo. Aba ngabantu endibakhonzayo.
Amagqabantshintshi Gcina abatyeleli befunda iBhlog yakho
Feb 7, 2007 ngo-11: 53 PM
Feb 8, 2007 ngo-7: 33 AM
Ndingumlandeli omkhulu weTechnorati kwaye kunokuba nzima kum ukuyiphepha. Ndiyathemba nje ukuba bayaqonda ukuba xa uzama 'ukulungisa' idemokhrasi, ayisiyontando yesininzi kwakhona.
Feb 8, 2007 ngo-1: 47 AM
Lowo ulawula ubuchwephesha uyaphumelela!
Utshilo uDouglas kwaye wamkelekile kwiNethiwekhi yeBloke yeeblogger eziqhelekileyo.
Feb 8, 2007 ngo-7: 32 AM
Kulungile, BB! Kwaye enkosi !!!
Feb 8, 2007 ngo-4: 10 PM
Molo Doug. Kwenzeka ndivumelane neninzi yale nto uyithethileyo. Ukuba ufunda iposti yam (oyenzileyo), uya kubona ukuba ndiyayibuza yonke inkqubo yeTechnorati ngokwayo. Hayi nokuba ilungile okanye ayilunganga. Kodwa kuthetha ntoni kwi-heck.
Kwaye btw, ndiyavumelana kakhulu nomhlathi wakho wokugqibela malunga nokuba ngubani ogqiba ngokubaluleka kwebhlog yam. Abafundi usana, bafundi!
Feb 8, 2007 ngo-7: 37 PM
Enkosi Dawud! Andiphikisani nendlela yeTechnorati yokubeka inqanaba… ndicinga nje ukuba iibhlog zeblogger zigqiba ukukhuthaza ezinye iiblogger… inqanaba liyasebenza, hayi 'gamed'. Yindlela elungileyo yokukhuthaza iibhlog ezingakhuthazwayo.
Elinye ilinge lokubeka inqanaba elihle nguT Todd Kwaye Amandla ka-150. UTodd uzama ukulinganisa injini nganye yokufumana amanqaku nokufumana amanqaku ngokufanelekileyo.
Feb 8, 2007 ngo-4: 25 PM
Andivumelani nenyani yokuba andikho kuluhlu luka-2000. Ngokuqinisekileyo, ingayinto yokwenyuka kwamaxabiso, kodwa ndilungile kuloo nto. Iziphumo ziya kuphela, kwaye ndishiyeke ndinabafundi abaninzi kunokuba ndiqale. Ndiqalise iiblogi ngaphambili, kwaye andikuthandi ukunyuka ngaphandle kokungaziwa. Andiqinisekanga ukuba ndikhe ndayishiya, kodwa ndenze intaba eninzi.
Feb 8, 2007 ngo-7: 34 PM
Inqaku elihle kakhulu uDouglas kwaye ndiyavuma i-100%. "Ukunyuka ngokungaziwa"… umgca ophezulu. Uluhlu lweebhlogi ziyathanda ukukhankanya omnye nomnye kuba ziyazi ukuba iyanceda kwinqanaba labo kunye nokuvezwa, ke 'umfana omncinci' uphakama njani apho? Iimemesi kunye nezintlu ezinje zezi zixhobo ezifanelekileyo zokufumana ukubonakaliswa.
Enkosi ngokuphawula kunye nokuma ngapha!
Feb 8, 2007 ngo-6: 06 PM
Iposti yam ngesihloko:
Ekukhuseleni iibhlog ze2000
Feb 10, 2007 ngo-2: 32 PM
Hayi. Itshiwo kakuhle. Isigqebelo sayo yonke loo nto. Inyala.
Feb 13, 2007 ngo-9: 49 PM
Esi sesinye sezona zithuba zibalaseleyo ndizifundileyo malunga neprojekthi yeebhlogi ze2000. Enkosi.
Siphila ngoku http://www.2kbloggers.com by the way 🙂 Ndisuse abokuqala abangama-300 kuba khange bacele ukuba yinxalenye yayo. Ubukulo qela. Ngaba uyafuna ukubuyela?
Feb 13, 2007 ngo-9: 52 PM
Ngokuqinisekileyo, uElaine! Ndiyayithanda iprojekthi. Ndiyayithanda iTechnorati kwaye ndiyaphazamiseka kancinci ngempendulo endiyibonileyo kwiprojekthi.
Mar 3, 2007 ngo 12:39 PM
Enkosi ngezimvo zakho kwaye uyeke!